दिवेश पोखरेल पुगे अमेरिकन आइडलको उत्कृष्ट सातमा
२०७७ बैशाख २९ सोमबार, नेपाली गायक दिवेश पोखरेलले विश्वको उच्च सांगीतिक प्लेटफर्म अमेरिकन आइडलमा तहल्का मच्याएका छन् । ... बाँकी अंश»
गुड गोली मिस मोली गायक लिटिल रिचर्ड रहेनन्
२०७७ बैशाख २८ आइतबार, चर्चित संगीतकार तथा गायककार लिटिल रिचर्डको मृत्यु भएको छ । ८७ वर्षको उमेरमा उनको शनिबार ज्यान गएको हो । ... बाँकी अंश»
जब सलमानले समाते शाहरुखको कठालो
२०७७ बैशाख २४ बुधबार, काठमाडौं । भारतीय स्टारहरु शाहरुख खान र सलमान खानको दोस्ती धेरैजसो पार्टी र फिल्महरुमा देख्न पाइन्छ । तर, कुनै समय यस्तो पनि थियो कि यी दुई हस्ती दुई भागमा विभाजित भएका थिए । ... बाँकी अंश»
संजय दत्तलाई अझै छैन ऋषि कपूरको मृत्युको विश्वास
२०७७ बैशाख २३ मंगलबार, यस अघि, रणबीर कपूरले बुबा ऋषि कपूरको अस्थि मुम्बईको बाणगंगामा विसर्जित गरेका थिए।सो अवसरमा रणबीर आफ्नी आमा नीतू कपूर, दिदी रिद्धिमा कपूर, आलिया भट्ट र अयान मुखर्जीसँग पुगेका थिए। ... बाँकी अंश»
वास्तविक जीवनमा नाता रहेका बलिउड स्टार
२०७७ बैशाख २२ सोमबार, काठमाडौं । फिल्ममा कलाकारहरुको बीचमा विभिन्न किसिमको नाता पर्ने गरेको देखाइन्छ । वास्तविक जीवनमा भने उनीहरुको सम्बन्ध्को विषयमा धेरैलाई थाहा हुँदैन । यहाँ वास्तविक जीवनमा नै नाता भएका भारतीय सेलिब्रेटीहरु उल्लेख गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
महेन्द्रसिंह धोनी र उनकी पत्नी शाक्षी
२०७७ बैशाख २२ सोमबार, भारतीय पूर्व क्रिकेट कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीकी पत्नी साक्षी धोनीले पनि आफूलाई फेसनेबल बनाउने क्रममा सन्नी लियोनीको पोज देखाएकी छिन् । ... बाँकी अंश»
यसकारण विवाहित सैफसँग करीनाले गरिन् विवाह
२०७७ बैशाख २१ आइतबार, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सैफ अली खान र करीना कपूर खान बलिउडका चर्चित जोडि मध्येका एक मानिन्छन् । सैफ अली खान र करीना कपूरको विवाह भएको ८ बर्ष भन्दा ज्यादा भएको छ । दुवैले सन् २०१२ मा विवाह गरेका थिए । सैफ अली खान र उनकी पत्नी करीना कपूर खानबिचको लगाभ राम्रैसँग देख्न सकिन्छ । सार्वजनीक कार्यक्रम र अवार्ड फंक्शनमा पनि दुवैलाई एकै साथ देख्न पाइन्छ । ... बाँकी अंश»
बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम ‘कथा खरर, मन हरर...’ सुरु हुँदै
२०७७ बैशाख २१ आइतबार, काठमाडौं। थिएटर मल कीर्तिपुर रङ्गमञ्च र थिएटर सेन्टर फर चिल्ड्रेनले क्वारेन्टाइन अभियान अन्तर्गत बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम ‘कथा खरर, मन हरर...’ सुरु गर्दैछ । ... बाँकी अंश»
अमिताभ किन बने दुखी ?
२०७७ बैशाख १९ शुक्रबार, ऋषि कपूर र नीतू सिंहको विवाहमा रेखा सिउँदोमा सिन्दूर लगाएर पुगेको घटनाले यसलाई थप मलजल गरेको थियो । ... बाँकी अंश»
ऋषि कपूरको मृत्युपछि अमिताभ अझै स्तब्ध, सम्झेर लेखे भावुक पोष्ट
२०७७ बैशाख १९ शुक्रबार, अमिताभ कहिल्यै ऋषि कपूरलाई अस्पतालमा भेट्न गएनन्। अमिताभले भने 'जीवनको प्रत्येक क्षणको आनन्द लिनु आफ्नो जीनमा थियो। उनले यो लेजेन्ड राज कपूरबाट पाए। म उनलाई भेट्न कहिले अस्पताल गइन। म उनको हसिलो अनुहारमा उदासीपन देख्न सक्दिन थिए। तर मलाई पक्का छ कि जब उनले हामीलाई छोडेर गए पनि उनले अनुहारमा पक्कै मुस्कान लिएर गएको हुनुपर्छ। ' ... बाँकी अंश»
कोहलीलाई अनुष्काकी हजुरआमाले खेलाउँथिन् क्रिकेट !
२०७७ बैशाख १९ शुक्रबार, अनुष्काको माइतीका सबैले विराटलाई राम्रोसँग चिन्छन् । बाल्यकालमा अनुष्काको घर जाँदा विराटलाई उनले निकै क्रिकेट खेलाउँथिन् । ... बाँकी अंश»
टोनी एलन रहेनन्
२०७७ बैशाख १९ शुक्रबार, ड्रमर टोनी एलन रहेनन् । नाइजेरियाका ड्रमर टोनी एलनको मृत्यु भएको हो । ... बाँकी अंश»
जब राजेश खन्नाले डिम्पललाई ऋषि कपूरको औंठी फाल्न लगाए
२०७७ बैशाख १८ बिहिबार, जब राजेश खन्नाले डिम्पल प्रस्ताव गरे, उनले रिंगलाई समुद्रमा फ्याँक्न भने। जब डिम्पलले रिंगलाई समुद्रमा फ्याँकिन् तब राजेश र उनी बीचमा प्रतिबद्धता भयो । र सत्य यो थियो कि म डिम्पललाई कहिले पनि माया गर्दिनथे। ... बाँकी अंश»
संजय दत्त ऋषि कपूरलाई मार्न पुगेका थिए अपार्टमेन्ट
२०७७ बैशाख १८ बिहिबार, चलचित्र 'कभी-कभी' ठूलो हिट भयो। ऋषि कपूर ऋषि कपूर भन्छन् कि उनले लगभग यो फिल्म अस्वीकार गरे किनभने फिल्ममा नीतूको भूमिका उनी भन्दा बढी शक्तिशाली थियो। ऋषिले आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन्, 'मैले 'कभी-कभी' 'प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेको थिए। ... बाँकी अंश»
अमिताभलाई हराउन अवार्ड किनेका थिए ऋषि कपूरले, केही रोचक किस्सा
२०७७ बैशाख १८ बिहिबार, 'खुल्लम खुल्ला' नामको आत्मकथामा ऋषि कपूरले भनेका थिए, मैले ३० हजार रुपियाँ दिए फिल्मफेयर अवार्ड मेरो नाममा गरेको थिएँ। वास्तवमा यो १९७३ को कुरा हो। यसैले उनले 'बबी' फिल्मका लागि सर्वश्रेष्ठ अभिनेताको पुरस्कार जिते। त्यस समयमा अमिताभ बच्चन 'जंजीर' मा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गर्ने उनका प्रतिस्पर्धी थिए। ... बाँकी अंश»
अस्पतालमा पनि हसाएरै गए ऋषि कपूर, लकडाउनको पालना गर्न परिवारको अपिल
२०७७ बैशाख १८ बिहिबार, अस्पतालको ओछ्यानमा ढल्किरहेको बेला पनि कुनै तरिकाले मनोरन्जन गराउन खोजिरहेका थिए। यस प्रकार, ऋषि कपूरले आफ्नो जीवन्तता देखाए। सधै खुसी रहने ऋषि कपूरका परिवारका सदस्यहरूले पनि उनलाई आँसुको साथमा होइन मुस्कानका साथ सम्झन चाहेका छन्। ... बाँकी अंश»
रहेनन् ऋषि कपूर, लगातार दोस्रो दिन बलिउड शोकमा
२०७७ बैशाख १८ बिहिबार, बलिउड अभिनेता ऋषि कपूरको निधन भएको छ । गम्भीर बिरामी भएर बुधबार राति अस्पतालमा भर्ना भएका ऋषि कपूरको बिहीबार निधन भएको हो । ... बाँकी अंश»
बलिउड अभिनेता ऋषि कपूर गम्भीर, अस्पताल भर्ना, कोरोना परीक्षण पनि
२०७७ बैशाख १८ बिहिबार, बलिउड अभिनेता ऋषि कपूर गम्भीर बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । क्यान्सर पीडित उनको अवस्था गम्भीर भएपछि बुधबार राति मुम्बई स्थित एचएन रिलायन्स फाउन्डेशन अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
राजाको जस्तै जीवन बिताउँछन् 'मिस्टर बिन', करोडौको गाडि र बंगलाहरूको मालिक
२०७७ बैशाख १७ बुधबार, काठमाडौं । कलाकार रोवन एटकिन्सन जसलाई मानिसहरूले मिस्टर बिनको नामले चिन्छन् । ९० को दशकमा प्रत्येक बच्चा 'मिस्टर बिन' का फ्यान थिए । ५ बर्षसम्म चलेको उक्त कार्यक्रम र मिस्टर बिनको प्रत्येक घरघरमा चर्चा हुन्थ्यो । ... बाँकी अंश»
खानको निधनमा अमिताभ भावुक, रवीना लगायतले दिए श्रद्धांजलि
२०७७ बैशाख १७ बुधबार, रवीना टण्डनले लेखेकी छन् - एक उत्कृष्ट कोस्टार, एक अभिनेताको रूपमा उत्कृष्ट र एक सुन्दर मानव। तपाईलाई कसैले बदल्न सक्दैन। हामीले तपाईंलाई धेरै चाँडै हरायौं! अविश्वसनीय ओम शांति। ... बाँकी अंश»